Kirin 810 သည်တရားဝင်ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။ Huawei မှ 7nm SoC အသစ်အကြောင်း | Androidsis
Kirin 810 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Huawei ၏ 7nm SoC အသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောပြပါမည်
အာရုန်သည် Rivas | | Huawei, NOTICIAS
ကျနော်တို့ပြောနေတာပါ 810 ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေမှာ chipset ကို 7nm ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယမြောက်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် 980နှင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ယခင်ကပေါက်ကြားခဲ့သောအခြားအချက်အလက်များသည် Huawei မှဒီပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းဒီနေ့ကြေငြာချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဒီမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာတကယ်ကိုအံ့သြစရာပါ။ ၎င်းတို့သည် Artificial Intelligence နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်များကိုမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
Kirin 810 အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Kirin 810 ယခုတရားဝင်
Huawei ပရိုဆက်ဆာကတ်တလောက်၏အဖွဲ့ဝင်သစ်ကို IA အပိုင်းတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီဗားရှင်းကို Da Vinci လို့ခေါ်တဲ့ NPU (စပိန်လို Neuronal Processing Unit) တပ်ဆင်ထားသည်။စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးပြီး Kirin 980 ထက် ပိုမို၍ စွမ်းအားကြီးမားသည် မကြာသေးမီကစမ်းသပ်မှုများ.
အဆိုပါ chipset တွင် Core ရှစ်ခုပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်လေးခုသည်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုအဓိကထားသော Cortex-A55 ဖြစ်ပြီးနာရီကြိမ်နှုန်း 1.88 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အခြား quartet ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် cores 76 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Cortex-A2.27 ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်ဂရပ်ဖစ်၊ ဂိမ်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအပိုင်းအတွက်၊ Mali-G52 ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်ဒီမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Mali-G51 GPU ကိုအသစ်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတဲ့စွမ်းရည်မြင့်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာအသစ် 710.
သတိပြုသင့်သည်မှာ Kirin 980, the Kirin XNUMX Snapdragon 855 နှင့် Apple ၏ Bionic A12၊ TSMC 7nm mode ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကပထမ ဦး ဆုံး Processor ကိုစေသည် အလယ်အလတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိစမတ်ဖုန်းများအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အောက်တွင်တည်ဆောက်ရမည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Huawei က၎င်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ဒီ System-on-Chip အသစ်၏ပုံပြုပြင်ခြင်းစွမ်းရည်သည်ဖော်ပြခဲ့သောအဆင့်မြင့် SoCs များနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းနှင့်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောညဥ့်အခါအာရုံမြင်ကွင်း algorithm ကိုထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းသည် NPU နှင့်လက်ချင်းတုအတုထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့် Huawei HiAi 2.0 နှင့်အတူလာသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူသည် Game + mode ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ အသစ်က Huawei က Nova5ဒီ chipset အသစ်နဲ့ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့စမတ်ဖုန်းပဲကမျှော်လင့်ရသည်နေစဉ် ဂုဏ်အသရေ 9X Pro ကို ဒါ့အပြင်တပ်ဆင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Kirin 810 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Huawei ၏ 7nm SoC အသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောပြပါမည်
Valve သည် Dota Underlords နှင့်၎င်း၏ crossover multiplayer ဖြင့် Android ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်
Galaxy Note 10 ၏ကင်မရာသည်အဖွင့်တွင်ဖြန့်ဝေထားသောတန်ဖိုးသုံးခုနှင့်အတူရောက်ရှိမည်